Shabaab oo shaqaale Caafimaad xirtay | KEYDMEDIA ONLINE
Shabaab oo shaqaale Caafimaad xirtay
SH.HOOSE(KEYDMEDIA) kooxda Shabaab ayaa xabsiga u taxaabtay dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo kaalma caafimaad u fidineysay dad ku dhibaateysan agagaaraha degmada wala-weyn ee gobalka Sh.hoose.
Dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha Caafimaad ee kooxda Shabaab ay xirtay ayaa tiradooda lagu sheegay in ay aheyd ilaa 9, waxaana dadkan ay u safreen in ay daryeel u fidiyaan dadka danyarta ah ee deegaanadaasi ku nool.
Waxa ay ka tirsanaayeen dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee la xiray isbitaalka Xaawa Cabdi ee duleedka Muqdisho oo horay ay u weerareen kooxdii Xasan Daahir oo iminka ku biirtay Shabaab sanadkii tagay.
Inta badan kooxda Shabaab ayaa falal arxan daro ah waxa ay ka geesteen deegaanada ay ka taliyaan iyaga oo aan dadka tix galin siinin dadka biri mageydada ah ee aan hubeesneen.
Tirada AMISOM oo ahayd 22,000, ayaa isbedelaysay sanad kasta, iyadoo ay jireen askar howlgalka ku dhintay, kuwa waqtigooda u dhamaaday oo dalkooda lagu celiyay iyo kuwa tagay shaqada Ciidanka.